Ezé Ripper China-Shank-onye na-echebe Ripper 112-2489-36 (E320-30) ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Aili
Ezé ripper-Shank-onye na-echebe Ripper 112-2489-36 (E320-30)
E320-35 Onye na-echebe akụkụ akụkụ 17.3KG
Nke gara aga: Cat J600 Standard Ogologo ogologo 6I6602
Osote: 3G6304 3G-6304 nkwụnye maka ezé katapila 1U3302 J300
Ọ dị na mpaghara Yichun City Jiangxi mara mma, dị nso n'ọdụ ụgbọ mmiri Ningbo na ọdụ ụgbọ mmiri shanghai. Aili bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ọkachamara na R&D, imepụta na ire nke akụkụ nkedo nkenke. Aili guzobere na 1980, anyị enweela ahụmịhe nkedo afọ 40. nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200; Ike mmepụta kwa afọ bụ tọn 24,000; Mbupụ na ụwa niile karịa mba 100; Mpịakọta Ahịa Kwa Afọ karịrị nde dollar iri atọ n'etiti ya, 60% bụ ahịa mba ofesi, 40% bụ ahịa ụlọ. Ọrụ
Companylọ ọrụ anyị nwere ahịrị mgbatị ego dị elu, ahịrị ahịrị ahịrị, ọkụ na-ekpo ọkụ gburugburu ebe obibi na-ekpo ọkụ, yana ngwa nnwale dị elu na ụlọ ọrụ a. Ugbu a, anyị na -enyekarị ụdị ịwụ excavator, bucke tteeth & ihe nkwụnye yana ụfọdụ nkenke nkedo & ngwaahịa adịgboroja dịka: ezé, ihe nkwụnye, onye na -egbutu akụkụ, mbepụ, bọket, ihe nchebe, pin, onye na -ejigide ya, bolt, nut ect Anyị nwere ike ịzụlite na chepụta ụdị ebu ọ bụla, ịkpụzi nkenke na ịkpụpụta ihe mgbe achọrọ. Akara ahia: Aili AIli nwere ụlọ nrụpụta ihe dị omimi, ụlọ ọrụ ihe nkiri seramiiki, ahịrị nrụpụta akpaaka anyị nwekwara ike ịkpọ ahịrị nhazi ụdị nrụgide Static (SPML, Aili bụkwa naanị onye nrụpụta na China na -eji ahịrị nrụgide static mepụta ezé na nkwụnye, ụlọ nrụpụta nkenke, ebu na CNCmachining center. AKWỤKWỌ Ule
Onye nchedo Ripper
Ezé Ripper - Shank - Onye na -echebe Ripper
Ezé Ripper - Shank - prote Ripper ...